Rakkoon nageenyaa Godina Matakkal sochii geejjibaa gufachiisuu isaa ibsame - ዜና ከምንጩ
Rakkoon nageenyaa Godina Matakkal sochii geejjibaa gufachiisuu isaa ibsame
konkolaataan hidha haaromsaa guddicha galtee dhiyeessaniis rakkoo kana qooddataniiru
Naannoo Beeniishaanguul Gumuuz Godina Matakkalitti Rakkoon nageenyaa jiru foya’uu dhabuu isaatiin sochii geejjibaa godinichaa gufachiisuuf isaa jiraattoonni naannichaa Addis Maaladaatti himaniiru.
Rakkoon tasgabbii naannoo Matakkalitti uumamee waggoota yoo lakkoofsise amma ammaatti furmaata waan hin argannee amma Kessumaa sochii hawaasa baadiyyaa daanggesuu isaa jiraattoonni godinichaa ibsaniiru. Sochiin geejjibaa gufatee kun jireenya jiraattotaa qormaata keessa galchu isaa jiraattoonni dubbataniiru.
Rakkoon nageenyaa naannichaa foyya’insa agarsiisuu dhabuu isaa hordofee godinichii komaand postiin bulaa jiraachaa kan jiru yammu ta’u yaroo dhiyoodhaa asitti immoo Raayyaa Ittisaa dabalee humnoonni addaa naannichaa bakka sanatti bobba’uun isaanii kan yaadatamudha. Haa ta’u male jiraattoonni akka jadhaniitti humni hidhata godinichatti hidhatee socho’uu hawaasa baadiiyyaa bilisummaadhaan bakka bakkatti akka hin sochonee taasiseera jadhaniiru.
Jiraattonni Addis Maaladaaf akka ibsaniitti yoo ta’e amma naannolee godinichaa magaalota ala taa’anitti tajaajilli Geejibaafi sochiin biraa daanggeefameera. sochiin bakka geejjibnni jirutti ta’uu immoo humna tasgabbiin deeggaramee ta’uun isaa ibsameera
Sochiin geejjibaa godinichaa haleellaa hidhattotaan gufate konkolaattota hidha haaromsaa guddicha meeshaa galchan irattille rakkoo umuusaanii jiraattoonni Addis Maaladaa eeraniiru. Daandii Gilgal Balasii gara hidha haaromsaa guddicha gessu irratti hidhattoonni kun konkkolaachiisaa tokko ajjeessanii qabeenyaa saamuu isaaniitiin konkolaataan hidha haaromsaatiif meeshaa ijaarsaa fe’an torbee tokko ol dhaabbachuu isaanii dubbataniiru.
konkolaataan meeshaa hidha haaromsaa guddichaaf ta’u fe’an Gilgal Balasiin darbanii deemuu waan dadhabanii rakkachaa jiraachuu isaanii namootiin ijaan argan Addis Maaladaatti himaniiru. ’’konkolaachiftoonni fe’umsa fe’anii dhaabbatanii torbee ol dhaabbachuu isaaniitiin rakkachaa jiru. isaan tokko tokko maallaqa of harkaa fixanii warreen siree kireessan akka gargaarannin gaaffanne jiraachaa jiru ’’jachuudhaan namootiin ijaan argan haala jiru himaniiru.
Rakkoon nageenyaa Matakkalitti uumamee waggaa lamaa ol yoo ta’es amma ammaatti furmaanni du’aafi buqqa’uun lammiilee dhabamsiisuuf hin argannee kan jedhan jiraattoonni kun Raayyaa ittisa bakka kana yoo jiraates rakinicha garuu furu hindandeenye jadhaniiru. Rakkinichi furmaata argachuu dhabuu isaatiin hawaasni naannichaa bara homisha baranaatti hojii qonnaa ijaa hin raawwanne waggaa dhufu rakkoo Geejibaafi dabalee beelaaf akka saaxilu hubachiisaniiru.
Raayyaan Ittisaaf humnoonni nageenyaa naannichaa godinichatti bobba’ani humna hidhata lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwatu irratti tarkaanfii fudhachuudhaan rakinicha maqsuu yoo jedhamee amma ammaatti homtu akka hin raawwatamnee dha jiraattoonni kan dubbatan. Humni nageenyaa mootummaa bobba’ani haleellaa humnaa humni hidhataa godinichatti socho’uu qaqqabsiisuu humna dhabamsiisuuf yoo qabatees tarkaanfii fudhachaa kan jiru akka hin taanee jiraattoonni taajjabuu isaanii eeraniiru. Waan kana ta’eef Mootummaan Federaalaa rakinicha hubatee rakkoo hawaasa godinichaa waggotiidhaaf itti fufee hiikuudhaaf humna hidhata kana irratti tarkaanfii fudhachuu akka qabu eeraniiru.
Godinoota sadii naannoo Beeniishaanguul Gumuuzitti argaman keessaa Rakkoon nageenyaa Godinoota Matakkaliifi Kamaashiitti jiru fooyya’uumsa barsiisuu dhabuu isaatiin filannoon biyyaalessaa jahaffaa Godinoota lachuutti gaggeeffamu dhabuun isaa kan yaadatamuu yammu ta’u Godinootiin lachuu mana mare bakka bu’oota ummataa haaraa hundeeffamee keessaa bakka bu’a hin qaban.
አዲስ ማለዳ 6 Onkololessa. 2014 No 17
Total views : 7512416